Tag: dhizaini infographics | Martech Zone
Tag: dhizaini infographics
DhizainiCap ndeye online graphic dhizaini chikuva izere nezviuru zvehunyanzvi zvakagadzirwa matemplate ayo anokubatsira iwe nyore kugadzira grafiki, kusanganisira: Dhizaini Kuona - Dhizaina infographics, mharidzo, mishumo, uye machati. Kushambadzira Graphics - Dhizaini maposita, mapepa, mabhurocha, kana mamamenyu. Yemagariro Midhiya Graphics - YouTube Mabhannera, YouTube Thumbnails, Facebook Peji Covers, Instagram Zvinyorwa. Zvimwe - Dhizaina makadhi uye kokero. Haasi munhu wese ari Illustrator guru kana ane mukana wekugadzira graphic, saka mapuratifomu akadai
Maitiro Ekukwiridzira nekusimudzira Infographics
Svondo, November 13, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kushambadzira infographics kwave kuri sosi yekutarisisa kukuru kuMartech. Zvakawanda zvekuti ini ndamisa Google Alerts yezwi infographic uye ndinozviongorora zuva rese. Sezvo infographics yakave yakakurumbira, iyo indasitiri yezvinhu iri kukurirwa neyakaipa infographics… saka isu takanaka kusarudza pane izvo isu zvatinogovana kana kusagovana isu kuti tivimbise kuti isu tinogara tichipa kukosha. Infographic Basics Chii chinonzi infographic? 10 zvikonzero infographics zvinofanirwa kuve
Nhasi ndadya masikati nechikwata chedu kubasa uye tataura kuburikidza newidget matekinoroji. Ini handisi fan of widgets kutaura chokwadi. Ini ndinotenda vanowanzo putsa kuenderera kwemifananidzo ye blog, kusanganisa mamwe emablog, uye anowanzovakwa kuti azviunze ivo pachavo uye kwete webhusaiti. Kunyangwe iwe uri kuwedzera majeti kana magajeti kune yako blog, webhusaiti yako, yako iGoogle peji kana kunyangwe desktop yako… mawijeti ari
Vhiki rino ndakagashira Tuned In kubva kuPragmatic Marketing. Ndiri nezve chetatu cheiyo nzira kuburikidza nebhuku izvozvi uye ndichiifarira. Kune akawanda maoko-pane mienzaniso yekuti mabhizimusi hubris akavatungamira sei pasi penzira yezvisarudzo zvisina kunaka nekuti ivo vasina 'Tuned In' kune avo tarisiro. Nekusaziva kuti tarisiro yavo yaida chii, makambani anga achivhura zvigadzirwa, masevhisi kana maficha ainhuwirira. Nekuuya kwe